Caabuq kasta oo tiibayda (qaaxada) waxay u baahan tahay daaweyn - Amjambo Africa
Waxaa qoray Alison Gorman, M.D. Greater Portland Health
Miyaad maqashay Qaaxada? Qaaxada (tiibayda) waa caabuq ay sababaan bakteeriyada qaaxada. Jeer-garaaca wuxuu aad ugu badan yahay dhammaan qaybo badan oo adduunka ah. Dadka qaba cudurka qaaxada waxay yeelan karaan infekshan firfircoon, oo ka dhigi kara inay dareemaan inay aad u jiran yihiin, ama waxay yeelan karaan infekshan aamusnaan ah, oo loo yaqaan ‘hurdadda qaaxada’ qarsoon, “oo aan lahayn astaamo gabi ahaanba.
Dadku waxay ku qaadi karaan bakteeriyada tiibayda iyagoo ku neefsanaya jeermiga hawada. Tani waxay badanaa dhacdaa marka qofku ku neefsado hawada ka dib marka qofka qaba qaaxo firfircoon uu ku faafo bakteeriyada isagoo la hadlaya, heesta,
Qofka qaaxada (tiibayda) firfircoon uu ka baxo, dhididka habeenkii, qandho , ama miisaan lumis. Badanaa, dadka qaba cudurka qaaxada (firfircoon) si fiican uma dareemaan.
Taas bedelkeeda, qof qaba infekshinka hurda ama qarsoon wuxuu dareemayaa caafimaad maxaa yeelay bakteeriyada ayaa hurda mana keenayso wax astaamo ah. Qofka qaba qaaxada qarsoon uma sii faafin karo jeermiga tiibayda dadka kale.
Waa muhiim in la ogaado haddii qof uu ku dhacay jeermiga tiibayda. Waxaan tan ku sameyneynaa baaritaanka maqaarka oo loo yaqaan \_”PPD\_” ama baaritaan dhiig ah. Labaduba waxay muujinayaan inuu qofku ku neefsado jeermiga tiibayda.
Haddii baaristu muujiso in qof ku neefsaday jeermiga tiibayda, waxaa muhiim ah in la ogaado in jeermigu hurdo ama soo jeedo. Sababta oo ah tiibayda (qaaxada) badanaa waxay keentaa astaamo sambabaha, bixiyeyaasha caafimaadku waxay hubiyaan xray of sambabka si loo hubiyo in bakteeriyada aysan sababin wax cudur ah. Waxay sidoo kale weydiin doonaan astaamo kale sababta oo ah tiibayda (qaaxada) waxay saameyn kartaa qaybaha kale ee jirka ka sokow sambabaha.
Haddii raajada ay muujiso cudur firfircoon, bukaannada waxaa loo gudbiyaa khabiirka qaaxada si loo daweeyo dawooyin xoog leh. Waa muhiim in bukaannadan la daaweeyo – waxay ilaalisaa caafimaadkooda, sidoo kale waxay ka hortagtaa inay jeermiga u fidiso dadka kale ee bulshada dhexdeeda. Bukaanka qaba qaaxada (qaaxada) firfircoon waxay la shaqeeyaan koox caafimaad si ay u hubiyaan inay helayaan daawada oo ay daryeelaan ay u baahan yihiin. Badanaa daaweyntu waxay socotaa dhowr bilood.
Haddii raajada aysan muujin wax cudur ah oo firfircoon sanbabada mana jiraan wax walaac ah oo loogu talagalay tiibayda (qaaxada), qofku wuxuu leeyahay infekshinka qaaxada qarsoon. Waxaa muhiim u ah dadka qaba infakshanka qaaxada qarsoon si loo helo daaweyn, sidoo kale. Qaarkood waxay isweydiiyaan sababta qofku u baahan yahay in loola dhaqmo haddii ay dareemaan wanaag; Tani waa sababta oo ah bakteeriyada hurdada waxay soo kicin kartaa waqti kasta oo waxay keeni kartaa infekshan firfircoon. Tani waxay ku dhacdaa 5-10% dadka. Haddii bakteeriyada soo tooso, dadku waxay dareemi karaan jiran ka dibna waxay u fidi karaan jeermiga kuwa kale.
Tijaabada cudurka qaaxada iyo daaweynta infekshinka qaaxada ee firfircoon iyo qaaxada (qaaxada) ayaa ka faa’iideysta dhammaanteen. Markii aan ka wada shaqeyno si aan u xadidano faafitaanka qaaxada, caafimaadka shaqsiyaadka iyo bulshadayadu way fiicnaanayaan. Fadlan la hadal kooxdaada caafimaadka haddii aad wax su’aalo ah qabtid ama aad rabto in lagaa baaro cudurka qaaxada
PreviousKahadalida cudurada galmada lagu kala qaado inkasta oo dhaleeceyn
NextWaa Macau amahdu?